သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အမှတ်တယ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးတစ်ခု
အင်တာနက်ကို တစ်လလောက်မလာပဲ လုပ်သင့်တဲ့ အခြားအရာတွေ၊ နွေကူးရောက်လို့ ပန်းစိုက်၊ တ၀က်တပျက်မှာ ပြစ်ထားတဲ့ ချုပ်လက်စ အကျီ င်္ဆက်ချုပ် စသဖြင့်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့်၊ အိပ်မက်ကစာရေးသူတွေ၊ နောက်ပြီး မဂျစ်တို့၊ ကိုတက်စလာတို့၊ ပန်းပွင့်လေးတို့၊ ကိုဒီဝိုင်း၊ ကိုသန့်စင်၊ စသဖြင့်သွားနေကြ အဲဒီရှစ်ယောက်နဲ့ အခြားသွားနေကျ စာမျက်နှာလေးတွေကို စိတ်ကရောက်နေသည်။ ဒါနဲ့ မဂျစ်ရဲ့စာမျက်နှာလေးဆီ ရောက်တော့ တရုပ်နှစ်ကူးကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းထားသည်ကို တွေ့တာနဲ့ နောက်မကျလောက်သေးဘူးထင်လို့ ကျွန်မလဲ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
တရုပ်နှစ်သစ်နဲ့ ဗီယက်နန် နှစ်သစ်ကူးနဲ့ က အတူတူပဲမို့ ဒီမြို့လေးမှာတော့ ဗီယက်နန်သူငယ်ချင်းတွေလဲ အရမ်းပျော်နေကြသည်။ ဒီမြို့မှာတော့ မြန်မာတရုပ်အဖွဲ့အစည်းက ဦးစီးပြီး နှစ်စဉ် စားသောက်ဆိုင်အကြီးကြီးမှာ မြန်မာပြည်က လူတွေအားလုံးစုပြီး အမှတ်တယ ညစာစားပွဲစားလေ့ရှိသည်။ စားသောက်လို့ပြီးချိန်လောက်မှာတော့ လူငယ်တွေက လူကြီးတွေကို အသံနဲ့နှိပ်စက်လေ့ရှိသည်။ ခက်တာက လူကြီးတွေကလဲ “ပန်းပုသူဇာခင်တို့၊ လှေကလေးကိုလှော်မည်” တို့လောက်ပဲကြိုက်ကြတော့ သူတို့ခမျာ အကြိုက်လိုက်ပေးရင်း သံစဉ်တွေလွဲရခြင်းသာဖြစ်မည်။
ကျွန်မရောက်ကာစအဖြစ်လေးတစ်ခုကို သတိရမိသည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဒီမြို့လေးမှာ မြန်မာဆိုလက်ချိုးရည်လို့ရသည်။ အဲဒီနေ့က သူငယ်ချင်းက အခေါ်ကောင်းတာနဲ့ စင်ပေါ်ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်မကော၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကပါ ဆယ်ကျော်သက်တွေ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ရုပ်ကချောမောလှပသည့်အပြင် ခေတ်ဆန်သည့်အ၀တ်အစားနှင့် စကတ်ကလဲတော်တော်တိုနေသည်။ ကျွန်မကလဲ မြန်မာပြည်ကရောက်ကာစ တောပုံ၊ ဆိုမည့်သီချင်းကလဲ သူကြိုက်တဲ့ အဲဒီသီချင်းကိုမှ ဆိုချင်သည်ဆိုလို့ ချစ်ကောင်းရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို တက်ဆိုဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားလေးသီချင်းကို သံစဉ်မမြှင့်ပဲ (ကီးမတင်ပဲ) ဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုယုံလောက်နှင့် ကျွန်မတို့ အဖြစ်ကိုတွေးကြည့်လို့ ရလောက်ပြီထင်သည်။ ကျွန်မတို့သည် မမမေဆွိလို ဘယ်သံစဉ်ကိုမဆို ဆိုနိုင်သည့်သူများ မဟုတ်။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မစင်ပေါ်မှာ ငူငူကြီးရပ်ပြီး ငါတော့ဒီမြို့ကနေ ကနေဒါအရှေ့ဘက်ကို ပြောင်းတော့မည်ဟု တွေးနေခဲ့မိသည်။ စင်အောက်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက လက်ခါပြပြီး “သိပ်ကောင်းတာပဲ၊ စိတ်ပျက်ဖို့”ဟုပြောသည်။ အလိုက်မသိတဲ့ အန်တီကြီးတွေကတော့ ဘိုသံပေါက်နေတဲ့ မြန်မာစကားနဲ့ “အို…သမီးတို့ ကသိပ်တော်တာပဲ” ဟုပြောသည့်အချိန်မှာတော့ ကျွန်မမျက်နှာ ပိုပြီးနီရဲနေခဲ့သည်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက “မကျေနပ်ဖူး၊ ငါသီချင်းဆိုတတ်တယ်ဆိုတာ လူတွေသိအောင် မြန်မာ-တရုပ် အသင်းဝင်ပြီးကို ညစာစားပွဲတိုင်းတက်ဆိုမယ်” ဆိုပြီးတရုပ်အသင်းဝင်ကြေး ချက်ချင်းကို ကောင်တာမှာ သွားပေးပါတော့သည်။ အရေးထဲမှာ ကျွန်မတို့အဆိုကောင်းသည်ဆိုပြီး တရုပ်လေးတစ်ယောက်က သုံးယောက်အတူတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သည်ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေသေးသည်။ ပွဲအပြီးကိုတော့ အသက် ၇၀ကျော် တရုပ်အမျိုးသားကြီးတဦးက မြန်မာသီချင်းကြီးကို သူကိုယ်တိုင် စည်းနဲ့ဝါး နဲ့ ဆိုပြီး ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ အဝေးရောက် မြန်မာတရုပ်တွေနဲ့ မြန်မာတွေအားလုံး မြန်မာပြည်ကို လွမ်းပြီး မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ကြသည်။ သူကိုယ်တိုင်လဲ သူနေထိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလွမ်းလို့ သီချင်းဆိုရင်းမျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျနေခဲ့သည်။
ကလေးဘ၀ ဖြူစင်ခဲ့သည့်အရွယ်တုန်းက အချို့ သူငယ်ချင်းတရုပ်မလေးတွေရဲ့ အိမ်ကိုသွားလည်တိုင်း သူတို့ မိဘတွေနဲ့ သူတို့တွေ အိမ်မှာ ဗမာလိုမပြောကြတာကို နားမလည်ခဲ့။ သူတို့မိဘတွေ မြန်မာလိုသိပ်မတတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲ နားမလည်ခဲ့။ ငါတို့ မိဘတွေ ပြည်ကြီးကို လွမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုလဲ ဘာမှန်းရေရေရာရာမသိခဲ့။ နှစ်ကူးရောက်ရင် သူတို့ပြည်ကြီးက လမ်းတွေပေါ်မှာ မီးပုံးပျံနီနီလေးတွေအောက်မှာ လူတွေအုန်းအုန်းကျက်ကျက်နဲ့ စည်ကားနေမှာကို မျှော်ရည်ရင်းလွမ်းနေကြမည့် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို အခုတော့ ကျွန်မနားလည်နေတတ်ပြီ…
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 10:19 PM
Every one who far away from home town, miss home at this special time "New Year".
Imagine how our family at home would celebrate it, more over colleague and friends would enjoy at this special time.
Like us , we , Burmese, do miss Thin Gyan which will come in near future , no one want to miss this special time........
Ifaburmese meetaburmese at any where in this world , he or she willingly to speak burmese. Because mother language can explain exactly what is one's emotional feeling inside the heart.
I would like to write this comment in burmese but I don't know how to do it. It is difficult for me to write in burmese computer key board here, apologie about it.
I totally agree with you......Chinese are speaking chinese where ever they are... that is good practice.
It isagood blog andagood job.I like it very much.